Galmudug oo war kasoo saartey Shir aan Farmaajo lagu casuumin | Keydmedia
Galmudug oo war kasoo saartey Shir aan Farmaajo lagu casuumin
Kulankan ayaa waxaa iclaamiyay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, oo sheegay in Farmaajo lagu casuumin madasha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay in 9-ka bishaan Dhuusamareeb ay martigelin doonto shir ay isagu imaanayaan madaxda shanta maamul goboleed ee ka jira Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood khilaaf kala dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo.
Shirka ayaa lagu go'aamiyay kulan Khadka Internet-ka [ZOOM] ay maanta oo Isniin ah ku yeesheen madaxda, oo isku raacay in wadahadallada wajiga koowaad aysan dowladda Federalka kasoo qeybgalin, si ay iyagu marka hore isagu raacaan hal mowqif oo la hor-imaan doonaan Farmaajo.
Waxaa lagu wadaa in maalinta berri ay Madaxweyniyeyaasha Puntland, Koonfur Galbeed, HirShabeelle iyo Jubaland ay gaaraan magaaladda Dhuusamareeb, oo Qoor-Qoor uu ku casuumey. Madaxweyne Farmaajo ayaa shalay la filayay inuu martigeliyo shir uu bishii lasoo dhaafay ku baaqay balse fashilmay.
Jubaland iyo Puntland ayaa mucaarad ku ah Villa Soomaaliya, halka saddexda maamul ee kale ay ku xiran yihiin Muqdisho.
Dalka waxaa ka jira khilaaf siyaasadeed oo meeshii ugu sareysay maraya, waxaa aad u yar wadashaqeynta dowladda dhexe iyo maamullada, taasoo meesha ka bixisay danta qaranka, oo ay kamid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, soo celinta nabadda iyo doorashooyinka.